Tag: email caalami ah | Martech Zone
Tag: email caalami ah
Isniin, Maarso 16, 2020 Monday, August 23, 2021 Douglas Karr
Waxaa jira khaladaad badan oo badan oo aad ku sameyn karto dhammaan barnaamijka suuqgeynta iimaylkaaga… laakiin macluumaadkan oo ka socda Email Monks wuxuu diiradda saarayaa khaladaadka khaldan ee aan sameyno ka hor inta aanad gujin dir. Waxaad ku arki doontaa wax yar oo ka mid ah wada-hawlgalayaashayada 250ok oo ku saabsan naqshadaynta iyo waxqabadka samatabbixinta. Aynu si toos ah ugu boodno: Jeegagga Soo-saarista Kahor inta aynaan bilaabin, ma waxaa nalooga dhigay guuldarro ama guul? Kafaala qaadayaashayada 250ok waxay leeyihiin xal aan caadi aheyn oo ku caawin kara
Waxaan ka caawinnay macaamiisha caalamiga ah (I18N), si fudud haddii loo dhigo, maahan wax lagu farxo. Nuujinta dejinta, tarjumaadda, iyo dejinta waxay ka dhigaysaa geedi socod adag. Haddii qalad lagu sameeyay, waxay noqon kartaa wax laga xishoodo… oo aan lagu xusin waxtar la'aan. Laakiin 70% dadka isticmaala khadka tooska ah ee dunida oo dhan 2.3 bilyan maahan dad kuhadla afka ingiriisiga waxaana $ 1 kasta oo lagu qarash gareeyo deegaanka la ogaaday inay hayaan ROI oo ah $ 25, marka dhiiragalinta waxay u tahay ganacsigaaga inuu socdo